Mety ho lasa lohan'ny fahefatra ve ireo bilaogera? | Martech Zone
Alahady, Martsa 8, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny fahamendrehana no fananana voalohany, ny fiangonana no faharoa, ny vahoaka no fahatelo… ary ny asa fanaovan-gazety dia noheverina ho fananana fahefatra foana. Rehefa nanomboka tsy liana tamin'ny fanaraha-maso ny vahoaka ny gazety ary - nifantoka tamin'ny tombom-barotra, dia nanomboka nijery ny asa fanaovan-gazety ny mpitory fa mpanelanelana ny dokam-barotra fa tsy ny tanjona eo amin'ny fiainana.
Manohy mahita ny fahafatesan'ny gazety isika na dia tsy niala teo aza ny talentan'ny asa fanaovan-gazety - ny tombom-barotra ihany. The famantaranandro fahafatesan'ny gazety Mbola mitohy. Malahelo aho mahita mpanao gazety mpanao famotopotorana manan-talenta maro very asa. [Sary avy amin'ny The Economist]
Nisy mpanao gazety tamina hetsika vao haingana izay niresahako ary nanontany ahy izy hoe inona eto amin'izao tontolo izao no hitoratany bilaogy raha hanomboka izy. Nolazaiko azy fa mijery bilaogy sy fanaovan-gazety ho fomba fifandraisana roa tena samy hafa aho. Raha ny fahitako azy dia bilaogera iray no mizara ny talentany manokana na ny zavatra niainany an-tserasera. Malaza be ny fanaovana bilaogy satria manapaka ny mpamokatra, mpanonta ary ilay mpanao gazety… ary mametraka ny mpijery mivantana eo imason'ilay manam-pahaizana.
Ka inona no holazain'ny bilaogera mpanao gazety?
Nanoro hevitra ahy ny hitoraka bilaogy momba ny asa fanaovan-gazety. Ny mpanao gazety dia olona manan-talenta sy mahay mandanjalanja tokoa. Mamolavola ny tantarany izy ireo rehefa mandeha ny fotoana, amin'ny asa mafy sy fandavahana mba hamantarana ny zava-misy. Na dia manao izany aza ny bilaogera indraindray amin'ny maha mpiambina azy, tsy mino aho na dia misy vitsivitsy aza afaka mifanandrify amin'ny talenta ananan'ireo mpanao gazety - tsy amin'ny fanoratana fotsiny, fa mandalo ny fotaka mba hahazoana ny marina.
Raha misy mpanao gazety mizara ny fahalalany ny asa-tànany amin'ny alàlan'ny bilaogy - ary na dia ny fahitana an'izay tantara iasan'izy ireo aza - ary manolotra fotoana hampiofanana sy hampiditra bilaogera, dia mety hisy fanantenana hipetrahana amin'ny Efitrano Efatra. Manantena aho fa manomboka bilaogy izy ary manomboka mampianatra ny ambin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny fomba ahafahantsika ho tonga mpiambina tsara kokoa.
Tontolo mampatahotra ity raha tsy misy ny Efitra fahefatra. Mazava ho azy fa ny haino aman-jery mahazatra antsika dia nanome ny toerany volana maro lasa izay satria ny famantarana ny dolara, ny tompon-trosa ary ny fitaomana politika dia nanadino ny maha-zava-dehibe ny asa fanaovan-gazety lehibe. Teo aho rehefa nanomboka nanao dokam-barotra tamin'ny gazety momba ny tapakila firy ao izahay fa tsy ireo mpanao gazety manan-talenta izay nomenao fidirana.
Nanoratra i Geoff Livingston tamin'ny fiandohan'ity taona ity fa ny haino aman-jery olom-pirenena dia ny Fifth Estate. Marina angamba izany, saingy tsy azoko antoka fa mendrika ny handray andraikitra na andraikitra toy izany isika.